यो कस्तो लापरवाही ? त्रिभुवन विमानस्थलको लगेज कक्षका दृश्य र यात्रुलाई दिइएको चरम यातना (भिडियो) «
यो कस्तो लापरवाही ? त्रिभुवन विमानस्थलको लगेज कक्षका दृश्य र यात्रुलाई दिइएको चरम यातना (भिडियो)
काठमाडौं, ५ पुस। देशको एक मात्र अन्तरास्ट्रिय विमान स्थल त्रिभुवन विमानस्थलको हालत अहिले पनि उस्तै छ । जति मन्त्रिहरुले छड्के हाने पनि जे गरेपनि सेवा जस्ताको त्यस्तै । विमानस्थलमा कतिसम्म लापरवाही हुन्छ र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ भन्ने यथार्थ बुझ्न तलको यो भिडियो हेरे पुग्छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भएपछि यो एयरपोर्टमा केही सुधार भएका छन्। तर यात्रुले पाउने हैरानी भने उस्तै छ। एयरपोर्ट कर्मचारीले यात्रुलाई गर्ने व्यवहार सुधारिएको छैन। बुधबार बिहान कतारको दोहाबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सका जहाजका यात्रुले आफ्नो लगेज लिनका लागि ४ घण्टासम्म कुर्नु पर्यो। एकै व्यक्तिले आफ्नो एउटा लगेज आधा घण्टामै पाउँदा अर्को लगेजका लागि तीन घण्टासम्म कुर्नु पर्यो। लगेज कुरेका यात्रुले हो-हल्ला र गुनासो गरेपछि एयरपोर्टका कर्मचारीले भित्रबाट लगेज पठाउन हतार गरेका थिए।
विदेशबाट आएका कतिपय यात्रुले आन्तरिक उडानबाट पोखरा, भैरहवा, चितवन जानका लागि टिकट पनि लिएका थिए। तर लगेज लिन ढिला भएकै कारण उनीहरूले आन्तरिक उडान छुटाउनु पर्यो। एयरपोर्ट कर्मचारीलाई अहिले पनि यात्रुका सामानमा कुदृष्टी लगाउने र सामान चोर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। नियतबस नै यात्रुका लगेजमा कर्मचारीले हैरानी र सास्ती थप्ने गरेका भुक्तभोगीको गुनासो छ।
विमानस्थलमा लगेज कुर्दा भित्रिकक्षमा देखिएको कर्मचारीको गतिबिधी र यात्रुका पीडा एवं अनुभव समेटिएको डिसीनेपालले तयार पारेको यो भिडियो ब्लग हेर्नुहोस्ः
श्रोत : डिसीनेपाल
भारतमा नेपाली कुस्तीबाज देव मगरसंग भारतका एक से एक पहलमान थर थर, जित्न नसकेपछि यसरी मैदान छाडेर भागे बढेमानका पहलमानहरु (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ, ५ पुस । पुरै माटो बिच्छ्याइएको मैदानमा खेलिने कुस्ती खेल हेर्दा लाग्छ के यस्तो पनि खेल हुन्छ र ? तर यहि खेलबाट नवलपरासीका एक युवाले आफुलाई चर्चित बनाएका छन् ।
यी भिडियो हेरेपछि पहिले त धेरैको मनमा सवाल उठ्छ कि यो वास्तविक भिडन्त हो कि नियोजित ? डब्लुडब्लुई रेस्लिङ जस्तो ‘नाटक’ त होइन ?
यस विषयमा हामीले बुझ्न चाह्यौं, नेपाल कुस्ती संघका अध्यक्ष नारायण देव राणासँग । उनले रेस्लिङजस्तो कुस्ती नाटकीय नहुने बताए । देव थापाले भारतका विभिन्न स्थानमा हुने ‘दंगल’ (कुस्ती प्रतियोगिता) मा भाग लिएर चर्चा कमाइरहेको उनले सनाए ।